SAWIRRO: Munaasabadda daah furka Madasha Xisbiyada Qaran oo ka socda Muqdisho -News and information about Somalia
Home Warkii SAWIRRO: Munaasabadda daah furka Madasha Xisbiyada Qaran oo ka socda Muqdisho
Waxaa xilligan magaalada Muqdisho ka socda Munaasabadda daah furka Madasha Xisbiyada Qaran, kaddib markii dhowaan Madasha ku dhawaaqday inay yeelatay Hoggaan ay ku mideysan yihiin.
Munaasabadda ayaa ka socota Hoolka Sahal, waxaana ka qeyb galaya munaasabadda Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran, Madaxdii hore ee dalka, Xildhibaano iyo marti sharaf kale.
Waa bandhig kale oo Isbaheysiga Mucaaradka ku muujinayaan cududooda siyaasadeed, iyo madasha ay ku mideysan yihiin, waxaa mar kale la filayaa inay diraan farriin siyaasadeed oo culus.
Muddooyinkii u dambeeyay kulamo ay hormuud ka yihiin Madaxdii hore ee dalka, Xildhibaano iyo Siyaasiyiin waxay magaalada Muqdisho ka wadeen olole siyaasadeed xoog leh.
Previous articleXildhibaan dhaashane “Puntland Hab Siyaasi ah & mid Ciidan waan ku difaaceynaa”
Next articleXOG: Dawlada Soomaaliya Oo Cunuqabateyn Saartay Ahlusuna & Wasiir Garoonka Laga Celiyey
Faa Faahin: Amar ka soo baxay Ahlusunna iyo cida uu ku...
Xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii Dhoobo oo weli ka taagan Puntand...